Igumbi lokulala elinye lasimahla eBalmain - I-Airbnb
Igumbi lokulala elinye lasimahla eBalmain
Entsha, yanamhlanje, igcwele ukukhanya, i-54 sqm equlethwe yindlu ezimeleyo ebekwe kwigadi yendlu yakudala yaseBalmain.Indawo yokuhlala inokufikelela okwahlukileyo kwindlela engasemva kwendlu kwaye ibucala ngokupheleleyo kunye nendawo yayo yangaphandle.
Luhambo olulula ukuya kwiivenkile zaseBalmain, iikhefi kunye neebhari kunye nonxweme lweSydney Harbour.
IBalmain yipeninsula eyi-3km kuphela ukusuka kwi-CBD ngoko ukufikelela esixekweni okanye eDarling Harbour kuyakhawuleza kwaye kulula nokuba ngesikhephe okanye ngebhasi.
Le ndlu yabucala kakhulu ikwindawo yokuhlala ezolileyo kodwa inokufikelela ngokulula kwiibhasi kunye nezikhephe eziya ngqo esixekweni.Le ndlu ikhanya kakhulu kwaye inelanga kodwa inomgangatho olawulwa kude ukuya kwisilingi.Singabamelwane beSikolo sikaRhulumente saseBirchgrove ukuze zivakale izandi zabantwana.
4.91 · Izimvo eziyi-141
I-Balmain yindawo yembali kwi-peninsula ekufutshane nombindi wesixeko kwaye ijikelezwe ngamanzi eZibuko laseSydney.Ukusuka kwiflethi kukho inani leehambo ezintle zezibuko ezidlula iDawn Frazer Harbour Pool yembali evulekele ukuqubha lonke ihlobo.Kukwakho nezakhiwo ezininzi ezidala ezinomdla kunye nee-pubs ezinokutya okuninzi, ukusela kunye namathuba okuthenga.
Ababuki zindwendwe bahlala kwindlu enkulu ngaphambili kwibhloko enkulu kwaye bayakuvuyela ukunceda iindwendwe ngemibuzo. Ababuki zindwendwe ngabakhenkethi rhoqo yaye bayakuvuyela ukudibana nabantu bazo zonke iintlanga.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-2242-2